Tag: mmuta | Martech Zone
Olee Ihe Dị Mkpa Foto Dị na Dijitalụ Gị Ọdịnaya?
Wednesday, October 3, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ihe onyonyo bu ihe di iche na iche iche anyi n’eme n’ime ihe omuma obula m gha enyere ndi ahia anyi aka. Anyị na-etinye ihe dị ukwuu, ọbụna karịa, na ihe osise na ndị na-ese foto karịa ka anyị na-eme na nyocha na ederede. Na nlọghachi na ntinye ego na-akwụ ụgwọ mgbe niile. Kpọmkwem na foto, ọ baghị uru na m na ụlọ ọrụ ga-emefu $ 5k na $ 100k na ntanetị ọhụụ ọhụụ mana wụfu narị narị dollar na
Nkwurịta Okwu Na-agbanwe na Ọrụ
Wednesday, July 13, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Izu a, Anọ m na nzukọ abụọ na ụlọ ọrụ dị iche iche n’izu a ebe nkwukọrịta nke ime bụ ihe mkparịta ụka: Nke mbụ bụ Sigstr, ngwa ọrụ ntinye aka email iji jikwaa aha email n'ofe ụlọ ọrụ ahụ. Isi okwu dị n'etiti ndị ọrụ bụ na ndị ọrụ na-elekwasị anya na ibu ọrụ ha ma ọ bụghị mgbe niile ka ha na-ewepụta oge iji kpọtụrụ akara ahụ na mpụga na atụmanya na ndị ahịa. Site na ijikwa ntinye aka email n'ofe otu nzukọ, Sigstr hụ na nke ahụ dị ọhụrụ
Ikike: Ihe Na-adịghị Agbanwe Agbanwe Usoro Ọdịnaya
Enweghị izu na-aga n'ihu Martech Zone na anyị anaghị edozi ma na-ekerịta eziokwu ndị ọzọ, echiche, nhota, na ọbụnadị ọdịnaya ha site na akwụkwọ ozi na akwụkwọ ndị ọzọ. Anyị abụghị ebe a na-eche maka ọdịnaya ndị ọzọ, n'agbanyeghị. Kekọrịta echiche ndị ọzọ anaghị eme ka ị bụrụ onye nwe ikike, ọ na-ahụta ma na-ewusi ikike onye edemede ahụ ike. Mana cing ime nkwalite, ịza ajụjụ, nkatọ, inye nkọwa na ịkọwapụta ọdịnaya ndị ọzọ ọ bụghị naanị na-amata ma na-ewusi ike
AdTruth: gnitionghọta ndị na-ege ntị na Mobile Mobile
Tọzdee, Disemba 10, 2013 Tọzdee, Disemba 10, 2013 Douglas Karr
AdTruth bụ sọftụwia dị n’elu nke na-enye ndị ahịa ohere ịmata ndị ọrụ gafere websaịtị na ngwa ngwanrọ. AdTruth na teknụzụ gị dị ugbu a na-arụ ọrụ iji chọpụta, lekwasịrị anya na soro ndị ọrụ ka ị na-akwado ihe nzuzo na nhọrọ ndị ahịa. Imirikiti teknụzụ njirimara njirimara chọrọ nbanye iji mata onye ahụ na / ma ọ bụ kuki iji soro ha. Nsogbu dị na kuki bụ na a na-ehichapụ ha na ha anaghị adịgide adịgide. AdTruth jiri njirimara nke na-adịgide adịgide - ọbụghị a